ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေကို လွယ်လင့်တကူဝယ်ယူနိုင်မယ့် YELLO SMART PURCHASE - BUILK Myanmar
ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေကို လွယ်လင့်တကူဝယ်ယူနိုင်မယ့် YELLO SMART PURCHASE
IT ခေတ်ကြီးထဲမှာ ပစ္စည်းတစ်ခုကို လွယ်လင့်တကူဝယ်ယူနေအချိန် Construction Material တွေကိုလည်း Online ပေါ်ကနေ၀ယ်ယူရရှိနိုင်မယ့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တစ်ခုတည်းသော Online market တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေတဲ့ Yello Myanmar ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Yello Smart Purchase ကဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးနေလဲ ?
-လူကြီးမင်းတို့်ုလိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ရရှိနိုင်ခြင်း။
– ဈေးနှုန်းမှန်ကန်ပြီး Quality ပြည့်မှီတဲ့ Product ကိုသာရောင်းချေ ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် ။
– ပစ္စည်းရဲ့ Quality ကိုလည်း Yello Myanmar က အပြည့်အ၀အာမခံချက်ပေးထားခြင်း။
-လူကြီးမင်းတို့လိုအပ်တဲ့ Product ကို ဖုန်းဆက်လိုက်ရုံနဲ့ Site အ ရောက်ပို့ ဆောင်ပေးခြင်း ။
-စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အ၀ ပေးခြင်း (မှာယူပြီးသူတိုင်းအသိပါ ၊ ၀န်ဆောင်မှုအပြည့်အ၀ပေးတာကြောင့် တစ်ခါမှာယူပြီးတဲ့ Customer တွေထပ်ခါထပ်ခါမှာယူတဲ့ Yello Myanmar )
-Customer ဘက်ကလိုအပ်တဲ့ Specification ကိုလည်းအချိန်တိုအတွင်း Customer ဆီအရောက်ပို့ပေးနိုင်ခြင်း ။
-Deliver , Labour တွေကိုလည်း Online ကနေ Charges အသက်သာဆုးံနဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ် ။…….စသည့် အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်ပါတယ် ။
Myanmar Yello Smart Purchase ကတော့ mm.builk.com ကိုအသုးံပြုလျှက်ရှိတဲ့ ကန်ထရိုက်တာများကို သက်သာသောဈေးနှုန်းများနဲ့ရောင်းချ ပေးတဲ့ Online Market တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ Builk Myanmar ကိုအရှေ့တောင်အာရှအနှံ့ရောင်းချနေသော ဆောက်လုပ်ရေး Online Market တစ်ခုဖြစ်ပြီးောဆက်လုပ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့် တင်သွင်းသူများကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Online Market ဖြစ်တာကြောင့် ကန်ထရိုက်တာများအ နေနဲ့သက်သာသောဈေးနှုန်းနဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ် ။
Online Market ကနေဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့အတွက် Quality မပြည့်မှာ Price မမှန်မှာစိုးရ်ိမ်စရာမလိုပါဘူး ။ Quality ပိုင်းမှာ စိတ်ချရပြီး ၊ ဈေးနှုန်းပိုင်းမှာလည်းအသက်သာဆုးံဖြစ်တဲ့ Best Price နဲ့ ရရှိမှာဖြစ်ပြီး …အာမခံချက်အပြည့်အ၀နဲ့ ရောင်းချပေးနေတဲ့ Online Market တစ်ခုလည်းဖြစ်သလို ……………………………mm.builk.com ကလည်းဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုင်တာ များအ နေနဲ့ ငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုကိုထိရောက်မှုရှိစေရန် ကူညီပေးတဲ့ website ဖြစ်သလို Yello ကလည်း ကန်ထရိုက်တာများကိုအသက်သာဆုးံသော ဈေးနှုန်းနဲ့ ရရှိစေမှာပါ ။
ငွေ ပေးချေမှုစနစ် ကရော ….?
ငွေပေးချေမှု စနစ်ကတော့ Bank ကဖြစ်စေ ၊ ဆိုဒ်ထဲကနေ ငွေရှင်းဖို့အဆင် မပြေရင် ဆိုဒ်အ ရောက်ငွေလာသိမ်းပေးခြင်း ၊ POS စက်များနှင့် Side အရောက်ငွေပေးချေမှုခြင်း စသည့် ဖြင့် Customer တွေကိုအဆင်ပြေ အောင်ဝင်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ် ။
Yello Myanmar ကိုအသုးံပြုပြီးနောက်ထပ်ရရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အရေး…..
Yello Myanmar ကနေ၀ယ်ယူအားပေးတဲ့ Customer တွေအနေနဲ့ Builk Myanmar ရဲ့ ငွေ ကြေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကိုအသုးံပြု နေတဲ့ Pro Network တွေကို CB Bank နဲ့ပူးပေါင်းပြီး Yello Myanmar ကနေ၀ယ်ယူအားပေးဖို့ရန်အတွက် Credit Card ကို လည်းဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသေးတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းရောင်းချနေတဲ့ E-commerce အခွင့်အရေးကို Yello နဲ့ လက်တွဲပြီး ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုလွယ်လင့်မကူရှာဖွေလိုက်ပါ ။
New Step by Step Roadmap for Perspectives on Psychological Science
Who’s Discussing Frontiers in Plant Science and Why You Should Be Worried